वित्तीय साक्षरता Archives ~ Page3of 36 ~ Banking Khabar
बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन गर्दा दिने व्याज र कर्जा प्रवाह गर्दा लिने व्याजबीचको अन्तर नै स्प्रेड रेट हो । उदाहरणका लागि, कुनै एउटा बैंकले निक्षेपबाट औसतमा तीन प्रतिशत व्याज दियो र लगानीबाट औसतमा पाँच प्रतिशत व्याज उठायो भने उक्त बैंकको स्प्रेड रेट दुई प्रतिशत हुन्छ । वास्तवमा स्प्रेड रेट बैंकहरुको कमाईसँग
बैंकिङ खबर । बैंकले दिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार नै आधार दर ( बेस रेट) हो । बेस रेटमा शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर बैंकहरुले ब्याजदर तोक्न पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्दछ । आधार दर भन्दा बढी कुनै पनि बैंक तथा बित्तीय
प्रदिप खतिवडा- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता भएका ग्राहकहरुलाई ग्राहकले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गरेको विभिन्न प्रकारका वित्तीय उपकरणहरु प्राप्त गर्ने, ग्राहकको तर्फबाट एजेण्ट भई बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्ने, विल्सको संकलन र भुक्तानी सम्बन्धि कारोबारलाई बिल कलेक्सन कारोबार भनिन्छ । बिल कलेक्सन गैरकोषमा आधारित बैंकिङ सुविधा हो, जसले बैंक एजेण्टको रुपमा ग्राहकको खाता सञ्चालन गरी बिल्स प्राप्ती
कसरी छानिन्छन् गभर्नर ? गभर्नरको काम कर्तब्य र अधिकारहरु (विस्तृतमा)
बैंकिङ खबर । कुनै पनि मुलुकमा सरकारको बैंकका रुपमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले काम गरेको हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंक संचालनका लागि दक्ष गभर्नरको आवस्यकता हुन्छ । नेपालमा सरकारको बैंक र बैंकहरुको पनि बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय भएकाले गभर्नर छानिने प्रक्रिया, काम कर्तव्य र
शेयर बजारमा लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु
साधारण शेयर (Ordinary or Common Share) कम्पनीले आर्जन गरेको नाफाबाट अग्राधिकार शेयरवालाहरुलाई तोकिएको दरमा लाभांश वितरण गरिसकेपछि बाँकी हुन रकमबाट लाभांश वितरण गरिने गरी जारी गरिएको धितोपत्रलाई साधारण शेयर भनिन्छ । साधारण शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई आफ्नो लगानीको मात्रानुसार सम्बन्धित कम्पनीको स्वामित्व प्राप्त हुन्छ र उनीहरुलाई कम्पनीको स्वामी (Owner) मानिन्छ । कम्पनीको स्वामीको हैसियतले साधारण
बैंकास्योरेन्स के हो ? किन छ महत्व ?
बैंकिङ खबर । सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा बैंकास्योरेन्स भनेको कुनै पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रोडक्ट बैंकमार्फत विक्री गर्नु हो । यसका लागि कुनै पनि बैंक र इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच पहिले सम्झौता हुन्छ । सम्झौता पश्चात्, बैंकले उक्त बीमा कम्पनीको प्रोडक्स ग्राहकहरुलाई विक्री गर्ने गर्दछ । किन छ यसको महत्व ? बैंकास्योरेन्स सम्झौताले दुबै पक्षलाई फाइदा पुग्छ । एकातर्फ,
एसडिआर के हो ?
बैंकिङ खबर । एसडिआर भनेको बैंकको आफ्नो छुट्टै मुद्रा हो, जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले रुपैयाँमा आफ्नो कारोबारको हिसाब किताब राख्ने गर्छ । एसडिआरको पुरा रुप स्पेशल ड्रइङ राइट हो । एसडिआरको मुल्यांकन गर्न अन्तराष्ट्रिय बैंकहरुले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुको मुद्राको मुल्य र ती देशमा रहेको सुनचाँदी अवस्थाका साथै देशमा भएको विदेशी सञ्चित रकमको समेत अध्ययन गरेको हुन्छ
नेपालमा नोटको इतिहास यस्तो छ
बैंकिङ खबर। के तपाईलाई थाहा छ ? नेपालमा कति रुपैयाँ बराबरको नोट तथा सिक्का छापिएका होलान ? नेपालमा नोटको छपाई हुन थालेको वि.सं. २००२ देखि हो । त्यतिबेला सदरमुलुकी खानाबाट कागजको नोट छाप्ने काम गरिन्थ्यो । तर वि.सं. २०१३ सालमा राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि भने २०१६ सालदेखि राष्ट्र बैंक आफैले नोट निष्काशन तथा छपाई
बजेट के हो ? कसरी बनाइन्छ ?
बैंकिङ खबर । सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संबैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरु पनि उल्लेख हुन्छ । बजेटले आम जनताका रुचिहरु र सरकारका नीतिहरुको संयोजन गर्ने काम गर्छ ।
गुड फर पेमेन्ट चेक के हो ? कसरी हुन्छ भुक्तानी ?
बैंकिङ खबर । खातामा ईस्यूड रकम भएको र चेकमा लेखिएको रकम भुक्तानी गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्न भुक्तानी योग्य छ भनि सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको चेकलाई गुड फर पेमेन्ट चेक भनिन्छ । यस्तो चेक बनाउनका लागि खातावालाले आफ्नो खातामा चेकमा जति चाहिने हो त्यति रकम बराबरको चेक काट्दछ । यस्तो चेकलाई बैंकले केहि शुल्क लिएर चेक
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) के हो ?
गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यो वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतया कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा आफुले अवैध
बैंकिङ खबर । दुई वा दुई भन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्था एक आपसमा गाभिई नयाँ संस्था बन्ने कार्यलाई मर्जर भनिन्छ । मर्जर प्रक्रियामा गाभ्ने र गाभिने संस्था संलग्न हुन्छन् । गाभिने संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व वा व्यवसायलाई आफूले स्वीकार गरी लिन मन्जुर गरेको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था गाभ्ने संस्था हो भने आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व वा व्यवसायलाई गाभ्ने संस्थामा हस्तान्तरण गर्ने
बैंकले कर्जा दिने आधारहरु र कर्जा लिने व्यक्तिमा हुनुपर्ने विशेषताहरु
बैंकिङ खबर / भविष्यमा भुक्तान गर्ने गरि लिइएको रकम कर्जा वा ऋण हो । सामान्यतयाः ऋण प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने गर्दछ भने कर्जामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रत्याभुती पनि पर्ने गर्दछ । बैंकहरुले संकलित निक्षेप तथा पुँजी बिभिन्न क्षेत्रमा अल्पकालिन, मध्यकालिन तथा दिर्घकालिन कर्जा प्रदान गर्ने गर्दछ । यस अन्तर्गत बैंकले ब्यक्तिगत ग्राहकलाई सुन, चाँदी,